बायर्न म्युनिख ऐतिहासिक सफलताको संघारमा « AayoMail
बायर्न म्युनिख ऐतिहासिक सफलताको संघारमा
2020,7 July, 7:30 am
बायर्न म्युनिख अहिले ऐतिहासिक सफलताको संघारमा छ। घरेलु लिग र कप दुवै जितेयता अब बायर्नको नजर युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा केन्द्रित छ। धेरैले भन्न थालेका छन्, यसपल्ट युरोपेली क्लब फुटबलको सबैभन्दा ठूलो उपाधि जित्ने पालो बायर्नकै हो।
प्रशिक्षक हान्सी फ्लिकको नेतृत्वमा बायर्नले यो काम गर्न सक्ने छ तर साँच्चै यस्तै भयो भने कमाल भयो। नत्र घरको लिग र कप जितेर मात्र के भयो र भन्नेले यस्तै भन्ने छन्। प्रश्न प्रशिक्षक फ्लिकलाई लिएर छ, यी कत्तिका छन् त?
ग्वार्डिओलाभन्दा फ्लिक राम्रो !
हान्सी फ्लिक को हुन् त ? उनी हुन्, बायर्न म्युनिखका प्रशिक्षक। उनको नेतृत्वमा बायर्नले राम्रो मात्र खेलेको छैन, धेरै राम्रो खेलेको छ। क्लबले भर्खरै बायर लेवरकुसनलाई हराएर जर्मन कप जित्यो। फ्लिकको नेतृत्वमा बायर्नले खेलेका ३२ खेलमा यो २९ औं जित हो । बाँकी खेलमध्ये एक बराबरीमा टुंगेको थियो भने दुई हारमा। लिगको आधारमा गणना गर्दा त यो अधिक्तम ९६ अंकमा ८८ हात पारे जस्तै भयो।
गज्जब छैन र यो? छ।
यो त पेप ग्वार्डिओलाले बायर्न सम्हाल्दाका दिनभन्दा राम्रो हो। सन् २०१३ मा ग्वार्डिओलाना क्लब सम्हाल्न म्युनिख आइपुगेका थिए। उनको नेतृत्वमा बायर्नले खेलेका सुरुआती ३२ खेलमध्ये २८ मा जित रह्यो। बाँकी खेलमा दुई बराबरी र दुई हार। ग्वार्डिओलाले बार्सिलोना र म्यानचेस्टर सिटीको जिम्मेवारी पनि हेरिसकेका छन्। तर यत्तिको सानदार सुरुवात हात पार्न सकेका छैनन्। त्यसैले त्यही बेला भनिएको थियो, यो कीर्तिमान कहिल्यै टुट्ने छैन।
बायर्नले यत्तिको अद्वितीय सुरुवात अब फेरि कहिले पनि लिन सक्ने छैन। तर भइदियो अर्कै। फ्लिक आएयता यी सबै दाबी फेरिए। कसरी त? अब त कस्तोसम्म भएको छ भने बायर्नले लिग र कप दुवै जितेयता यस्तो स्थितिमा पुगेको छ, जहाँ क्लबले त्यो काम गरेर देखाउन सक्ने छ, जुन ग्वार्डिओलाले सकेनन्।
त्यो भनेको युरोपेली च्याम्पियन्स लिग जित्नु अनि यो भनेको एकै सिजन तीन उपाधि जित्नु। घरेलु लिग र कपपछि युरोपेली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो उपाधि।
फुटबलको भाषामा यसलाई ‘ट्रिबल’ भने हुन्छ । फ्लिक यसमा सफल रहे, सन् २०१३ को त्यो सिजन दोहोरिने छ, जतिबेला बायर्नले साँच्चै यस्तै सफलता चाखेको थियो। त्यतिबेला प्रशिक्षक थिए, जुप हेन्सकेन्स।
संयोग कस्तो भने त्यो त्यही वर्ष थियो, जसको ठीक पछाडि ग्वार्डिओला म्युनिख आइहाले। ग्वार्डिओलाको बायर्नले पनि जर्मन घरेलु फुटबलमा एकछत्र राज गरेको थियो, तर उनले बिताएका तीन वर्षमा तीनैपल्ट बायर्न सेमिफाइनलमा रोकियो।
सायद फ्लिक ग्वार्डिओला जत्तिको ‘जिनियस’ छैन होलान्। तर उनी ग्वार्डिओलाभन्दा पनि अनुशासित छन् र बायर्न भनेपछि बफादार छन्।
सुरुको वर्षमा बायर्न रियल म्याड्रिडसँग हार्नुपरेको थियो भने दोस्रो वर्ष यही काम बार्सिलोनाले गरेको थियो। तेस्रो वर्ष एट्लेटिको म्याड्रिडले।
सायद फ्लिक ग्वार्डिओला जत्तिको ‘जिनियस’ छैन होलान्। तर उनी ग्वार्डिओलाभन्दा पनि अनुशासित छन् र बायर्न भनेपछि बफादार छन्। उनी अगाडि प्रशिक्षक थिए, निको कोभाच। त्यतिबेला बायर्नले राम्रो गर्न सकेन, त्यसैले कोभाच बर्खास्तगीमा परे। तर लगत्तै फ्लिक आएपछि बायर्न फेरि पुरानै उत्कृष्ट लयमा फर्केको थियो।
त्यो पनि तुरुन्तै जस्तै। त्यसकै प्रमाण हो, बायर्नले सजिलै लिग जित्नु। उत्तिकै सजिलै कप पनि जित्नु। अबको लक्ष्य भने च्याम्पियन्स लिग नै हो। एक प्रकारले बायर्न जत्तिको क्लबले घरेलु लिग र कप जित्नु कुनै ठूलो उपलब्धि नहुन पनि सक्छ।
कम्तीमा क्लबका आलोचकका लागि। यी आलोचक भन्ने गर्छन्, बायर्नले च्याम्पियन्स लिग त जितेर देखाओस्। फ्लिकले साँच्चै यस्तै गर्न सके भने मज्जाले भन्न सकिने छ, ग्वार्डिओलाभन्दा त फ्लिक नै राम्रो।